Kulan looga hadlayeey Hanaanka Maaliyadda oo Muqdisho lagu soo gabagabeyey – Radio Daljir
Kulan looga hadlayeey Hanaanka Maaliyadda oo Muqdisho lagu soo gabagabeyey
Diseenbar 13, 2018 7:07 g 0
Kulan howleedkan oo ku saabsanaa hannaanka maaliyadda ee federaalka iyadoo loo eegayo dib-u-eegista Dastuurka oo muddo laba maalin ah ka socday magaalada muqdisho ayaa la soo gabagabeeyay, waxaana kulankan soo wada qabanqaabiyay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka iyo Wasaaradda Maaliyadda XFS.
Ujeedada kulankan ayaa ahayd sidii loo heli lahaa hannaan maaliyadeed oo ku salaysan nidaamka federaalka si loogu qoro dastuurka ku meel gaarka ah ee ay dib u-Eegistu ku socoto, maadaama Hannaanka Maaliyadda ee feederaalka ku salaysan uu yahay mid ka mida waxyaabaha u baahan in wada xaajood siyaasadeed laga galo.
Kulanka oo ay ka soo qayb galeen Wasiirada Dastuurka, Arrimaha
Gudaha, Petroolka, Hantidhowraha Qaranka, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda, Wasaaradaha Maaliyadda Dowlad goboleedyada, Guddiga Farsamo ee wadaxaajoodka Arrimaha Federaalka, aqoonyahanno, Rugta ganacsiga iyo xeeldheerayaal arrimaha maaliyadda; waxaa intii uu socday lagu lafa guray arrimo ay kamid yihiin Wadaagga Dakhliga, Maamulka Miisaaniyadda, Hannaanka maaliyadeed ee federaalka ku haboon Soomaaliya, qoondaynta awoodaha heer federaaal iyo heer dowladgoboleed ee maamulka dakhliga iyo maaliyadda guud.
Aqoonyahhanadii ka qayb galay kulan howleedkan ayaa ka dooday arrimo badan waxayna soo bandhigeen nuucyo badan oo ah hannaanka maaliyadeed ee ay ku dhaqmaan dowladaha federaalka ka jira adduunka waxayna ku taliyeen in Soomaaliya ay yeelato Hannaan maaliyadeed oo Federaal ah ku haboon Soomaaliya.
Wasiirka Dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo kulanka Soo xiray ayaa Sheegay in heshiis syaasadeed laga gaari doono arrinta ku saabsan Hannaanka Maaliyadeed ee federaalka ku haboon Soomaaliya balse hadda ay sii diyaarinayaan talooyinkooda ku aadan arrintaas isla markaana la horgayn doono golaha amniga qaranka si ay heshiis siyaasadeed uga gaaraan.
“Waxaan isla falanqaynay sidii hannaan maaliyadeed Federal ah oo ku haboon Soomaaliya loo heli lahaa, waxaad soo bandhigteen howl fiican muddadii labada maalin ee aan halkaan joognay, wixii ka soo baxay kulankaanna waxaan ka diyaarin doonnaa warbixin islamarkaanna waxaan horgayn doonnaa Golaha Amniga Qaranka si Heshiis-Siyaasadeed looga gaaro islamarkaana loogu qoro Dastuurka” Ayuu yiri Wasiir Xoosh.
Maamulka degmadda Gaalkacyo oo bilaabay olole nadafadeed (dhegayso)